စုချစ်သူ: အစ်မသက်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ...
Posted by စုချစ် at 8/30/2013 01:17:00 PM
ကြီးစုအိတ်က ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ၀ါသနာကိုဦးစားပေးတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့အိတ်း)
အဟီး... ပိုစ့် ခေါင်းစဉ်မြင်ပြီး ရင်တွေတောင် ခုန်လို့... :P
ကင်းဒဲလ်ရော အိုင်ပက်ရော သယ်တယ်ဆိုတော့ လွန်တာပေါ့ ကလေးမရယ်... ပြီးတော့ အလှပြင်ပစ္စည်းမလိုအောင် လှပြီးသား ညီမဆိုတာ သိပြီးသား... အဲ.. စံရွှေမြင့် ပုံလေးက တူလိုက်တာ ချစ်စရာလေး...
Tag Post လေးရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင် ချစ်ခင်... <3
ထည့်ထားတာတွေ မနည်းဘူးပဲ။ အားကျလိုက်တာ.. :)
ဒီအိတ်ကလေးက စိတ်ကူးမယဉ်တတ်တဲ့၊ လက်တွေ့ကျတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ အိတ်... လို့ ထင်မိရဲ့။
ဟုတ်... ကော်မန့်လေးတွေအတွက် ကျေးဇူး အထူး အထူး...
တခြား သူတွေ အိတ်ကို လိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှ ရှက်လိုက်တာ... ကိုယ့်အိတ်က ရုပ်အဆိုးဆုံးပဲ...
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အိတ်ကလေးပါသူငယ်ချင်းရေ. အိတ်ကလေးဖွင့်လ်ုက်တာနဲ့ အနုပညာသမားတယောက်ရဲ့အိတ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်. အိတ်ကလေးကို ဂရုတစိုက်ကိုင်ပေးမယ့်သူရှိတာလဲ အိတ်ပိုင်ရှင်လေးအတွက်ရော အိတ်ကလေးအတွက်ရော ကံကောင်းတာပေါ့.
အိုင်ပက်ကော ကင်ဒယ်လ်ကော ဆိုတော့ ဟိုက်ရှာလပတ်ရည်လို့သာ အော်လိုက်မိတော့တယ်။ သူကြီးမင်းကတော့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထည့်သွားတာတောင် ဖတ်ရင်း ရထားပေါ် ခဏခဏ အိပ်ပျော်သွားတတ်လို့ အဲဒါကြောင့် လေးလံတဲ့ စာအုတ်တို့ အိုင်ပက်တို့ ယူသွားလေ့မရှိတော့ဘူး။
သယ်ရင်းတန်ခူးရေ... ကိုယ်ထင်တာကတော့ ကိုယ့်အိတ်က ပျင်းစရာအကောင်းဆုံးလားလို့... ပိတ်ရက် အပြင်သွားတဲ့ အိတ်ကို မပြလိုက်ရလို့... ဟိ... အဲသမှာတော့ နေကာညက်မှန်လေး ဘာလေး ပါ ပါတယ်... :)
သူကြီးမင်းရေ... ရှာလပတ်ရည် လို့တော့ မငြူစူပါနဲ့ဂျာ... စိန် ရွှေ တွေ ဝတ်မှ မဝတ်တာမို့... အဲသာလေးတွေ သုံးချင်တာတော့ ညက်စိမှိတ် ခွေးလွှတ်လိုက်ပါ... ဟိ...
တလောက အဘွားဆုံးလို့ ပြန်တော့ တွေ့တဲ့ ဆွေမျိုးတချို့က နို့...ညည်း ဟိုမယ် အလုပ်လုပ်နေတာ အဆင်ကောပြေရဲ့လားလို့ ဝိုင်းမေးကြတယ်... ကိုယ်ကလဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သမားမို့... နေပါအုံး...ကြီးဒေါ်တို့ ဘာလို့ မေးသလဲဆိုတော့... ဘာမှ မဝတ်မစားနဲ့ အလုပ်အကိုင် မကောင်းဘူးထင်လို့တဲ့.... တိန်... :P
မစုချစ် ဘယ်နှစ်ကီလိုရှိလဲ မှန်မှန်ပြောပါ။ ပုံပြဆိုလို့ ပုံပြလိုက်ပြီနော်။ လာကြည့်ပါအုံး =D
ဟဲ... မှန်မှန်ပြောပါမယ်... ၅၉ကီလို.... အရပ်ပုတယ်... ဒီတော့ လုံးဝပဲ... လုံးဝပဲ... ဟဲဟဲ...
သမီးက အိတ်အလေးချိန်မေးတာ ကိုယ်အလေးချိန်ဖြေတယ် ဟီးဟီး။ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။
ဟိုက်.... ရှက်တောင် ရှက်သွားတယ်... လူက အဲ့လိုကြောင်တတ်တာ... အဲ့သာကြောင့် သယ်ရင်းတွေကပြောတာ... နင့်လောက်အတာ နင်ပဲ ရှိတယ်တဲ့... ဟီး...
တိဝူးလေ.... မစုချစ် ဘယ်နှစ်ကီလိုရှိလဲဆိုတော့... ဟီး... အိတ်လို့ မထင်ဘူး... လူမေးတယ် ပဲ ထင်သွားတာ.... စိတ်ထဲမယ်.. အိတ် အကြောင်းရေးတဲ့ပိုစ့်မှာ ဘာကြောင့်များ လူအကြောင်း မေးတာလဲလို့... ဇဝဇဝါနဲ့... ပြီးမှ... အဲလေ... ဝ မဝ သိချင်လို့နဲ့တူပါတယ် ဆိုပြီး ဖြေလိုက်တာ... ဟဲဟဲ.... (ရှက်ရယ် ရယ် တယ်... :P)
အိတ်အလေးချိန်က အနည်းဆုံး ၃ကီလိုလောက်များ ရှိမလားမသိ.. အိ.... :)